सलमान खानमाथी आज अदालतको फैसला, होला फेरी जेल सजाय ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
सलमान खानमाथी आज अदालतको फैसला, होला फेरी जेल सजाय ?
By नेपाली कान्छा on 7:52 PM | nepali news, nepalnews, नेपाली खबर, समाचार | No comments
एजेन्सी । काला हिरण शिकार अभियोगले बलिउड सुपरस्टार सलमान खानलाई अझै छोडेको छैन । काला हिरण शिकार काण्डसँग सम्बन्धीत एक मामिलालाई लिएर आज अदालतले फैसला दिने भएको छ । शिकार मामिलासँगै सलमानलाई आर्म्स एक्टको अभियोग पनि लागेको थियो । त्यही अभियोगमाथी आज फैसला हुँदैछ । सलमानले अदालतमा झुटो सपथ पत्र दिएको अभियोगमा आज फैसला हुँदैछ ।
सन् १९९८ काला हिरणको शिकार गर्दा प्रयोग गरिएको बन्दुकको लाइसेन्स हराएको भन्दै सलमानले झुटो बयान दिएको आरोप अझै बाँकी छ । २१ बर्ष पुरानो झुटो बयानमाथी आजै फैसला हुँदैछ । अदालतको फैसलापछि सलमानमाथी फेरी अर्काे अदालतती कारवाही शुरु हुन सक्छ ।
सन् १९९८ मा जोधपुरमा काला हिरणको शिकार गरेको अभियोग लागेको थियो । अभियोगमाथी अदालतले फैसला सुनाएर जेल सजाय पनि भोगि सकेका छन् । तर हिरणको शिकार गर्दा प्रयोग भएको बन्दुकको लाइसेन्स हरायो भन्ने अदालती बयानले उनीमाथी अर्काे संकट आइलागेको थियो ।